Akụkọ - Na-eme mmemme ncheta afọ 30 nke Weibo Electric Isolation Transducer
Na-eji obi ụtọ na-eme emume ncheta afọ 30 nke Weibo Eletrik Isolation Transducer
On Oct. 18th, Weibo ụlọ ọrụ kpọrọ ndị prọfesọ si National University of Defence Technology, ọkachamara na automation ụlọ ọrụ na ọtụtụ imekọ ihe ọnụ mmekọ isonye na-eme ememe 30th ncheta nke Weibo Electrical Isolation Transducer.
Mr. Zhou Yong, onye isi oche nke Mianyang Weibo Electronic Co., Ltd., na-enye okwu nnabata. Ọ na-enye ekele dị ukwuu nye Mr. Ruan Ciyuan, onye nchoputa nke transducer kewapụrụ eletrik maka onyinye ya na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ na-akwado mmụọ mgba ahụ ma ghara ichefu obi n'okpuru nduzi nke onye isi njikwa Li Dong ma gosipụta atụmanya na ntụkwasị obi maka mmepe ụlọ ọrụ Weibo n'ọdịnihu.
Mazị Ruan Ciyuan, onye nchoputa nke transducer kewapụrụ eletrọnịkị, na-enyocha ọmụmụ ọmụmụ na mgba akụkọ ihe mere eme nke Weibo eletriki transducer kewapụrụ ma gosipụta ekele nye ndị ọrụ ibe na ndị isi rụkọ ọrụ ọnụ. Mazi Li Dong, onye isi njikwa na-enye okwu ya iji gosipụta àgwà nke ọrụ na mgba nke ụlọ ọrụ Weibo, na-agafe ụzọ mmepe nke Weibo n'ọdịnihu na ọrụ ngalaba na-achọ ka ụlọ ọrụ Weibo dịkwuo ike ma jupụta ọrụ na ike site n'enyemaka nke ndị niile na-ekere òkè.
Na-eguzo na iri atọ, ihe mmetụta ike nke Weibo agabigala asọmpi siri ike n'ahịa ahụ, ma gafere nkasi obi dị nro nke mgbanwe mgbanwe nke ikuku mmiri nke motherland; guzo na 30, nke a bụ uru nke ihe mmetụta ike Weibo ka na-eguzo; Na-eguzo na 30, ihe mmetụta ike Weibo N'ihi ịrụsi ọrụ ike nke ndị Weibo, ihe mmetụta ahụ ka jupụtara na ume ma na-aga n'ihu. Ọ bụ nkwenye nke ndị Weibo ịmalite azụmahịa ọzọ wee malite ọzọ. Ọ bụ ike nke ndị Weibo ka ha dobe ebumnobi mbụ ha ma na-aga n'ihu. Weibo ga-agafe afọ 30 otu mgbe. Lizhi Nian na-ekwu maka nghọta, na-eduga ihe ọhụrụ n'oge gara aga. Gaa n'ihu wee malite ọzọ ịchọ isiakwụkwọ ọhụrụ iji mee emume afọ ọhụrụ.
Oge nzipu: Ọgọst-01-2020
Oriri ike dị ala Dc ihe mmetụta ugbu a, Ihe mmetụta voltaji ugbu a, Mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a sensọ, Mmetụta Ụlọ Nzukọ Ac ihe mmetụta ugbu a, Ihe mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a, Ihe mmetụta dị ugbu a Ac dị elu,